Geetaachoo Asaffaa Eenyuu? Who is Getachew Assefa? Part III -
Geetaachoo Asaffaa Eenyuu? Who is Getachew Assefa? Part III
Namichi harka dhiigaa, kan lubbuu ilmaan Oromoo lafarraa duguugsise, qabeenya ummatichaa saamsise, jireenya ummata Oromoo mancaase, olaantummaa murna TPLF tiksuuf jecha biyyattii fi saboota cunqurfamuu irratti yakka daangaa hin qabne dalage ammayyuu hooggana olaanaa Itoophiyaati. Erga Mallas Zeenaawwii du’ee aangoo fi hooggansa biyyattii goodaa kaasee hanga gubbatti harka tikaa galchuun hiree bilisummaa ummatootaatti danqaa hin cabne ta’uuf deema. Qabxii kaleessa eegalame kunoo ti.
8) Qajeelcha Eegumsa Dirree Xiyyaaraa: Nama Mokonnin Gabramaariyaam jedhamuun hoogganama. Hojii ijoon caasaa kanaa nageenya imaltootaa eeguu, meeshaalee Cargo irratti eegumsa taasisuu, sochii maallaqaa to’achuu, eenyummaa namoota imalanii qulqulleessuu, dookumantii imaltootaa qulqulleessuu, qondaaltota seenanii fi bahan sirnaan ajjabuu kkf yoo ta’eyyuu, Tawaldee Gabremaariyaam waliin ta’anii Doolaara qondaaltota wayyaanee biyya alaatti to’annoo tokko malee baasuu irratti hojjetu. Tawaldee Gabremaariyaam dandeettii isaa malee sababa Tigiree ta’eef qofa ogeessa beekamaa fi nama daandii Xiyyaaraa sana maqaa itti hore Oromticha Girmaa Waaqee jedhamu aangoo irraa ari’uun beekamaadha. Ergasiis Tawaldeen gita hojii hundumaarratti ilmaan Tigiraay qofa ramadaa jira.
9) Qajeelcha Immigration: Qajeelcha Dhimma Nageenyaa biyya keessaatti aansee kan wayyaaneen akka qaroo ija isheetti ilaaltudha. Karaa damee nageenyaa fi to’annoo jedhamuun namoota leenjisanii biyya alaatti ergu. Namoonni kun karaa barnootaa, baqattummaa, fi hojii erga biyya alaa bahanii booda hawaasa biyya alaa keessa seenuun, miseensa paartii mormitootaa ta’uun ykn nama miseensa ta’e tokko hiriyoomfachuun, activist ta’uun odeessa sochii qabsoo ummataa argatan mara wayyaaneef gabaasu. Paartilee siyaasaa fi jaarmiyaa hawaasaa biyya alaa keessatti nageenya booressuun jibbiinsa, wal hammeessuu, maqaa wal xureessuu fi wal diiguun akka babal’atu irratti hojjetu. Gariin ammoo miseensa jaarmiyaa ta’uun bu’aa akka hin qabne lallabu ykn ilaalcha sana nama fudhachiisu. Yeroo tokko tokko ammoo tooftaa Sugar & Stick jedhamu fayyadamu. Kana jechuun nama tokko yoo danda’an faayidaan dadhaban humnaan amansiisuuf yaalu jechuudha. Haala qabsoo keenyaa gaafa ilaallu gama kanaan milkaa’uu isaanii waan hedduun madaaluu dandeenya.
Gama biraan waajjirri immigration kun Passport gurguruu, sanada sobaa qopheessuu fi maqaa jijjiiranii namoota biyya alaatti baasuun maallaqa guddaa argatu. Hojii kana yeroo dheeraaf namni Fissaahaa Maanjus jedhamu irratti dalagaa ture.
Kaayyoon caasaa tika wayyaanee Geetaachoo Asaffaan hoogganamuu olaantummaa Tigiraay karaa TPLF barootaaf tursuudha. Olaantummaa siyaasaa, dinagdee fi aangoo idil-addunyaa of harkatti galfachuudha. Daafii kanaa qabsoo ummataa cabsanii, qabsaa’ota marartee malee ajjeesanii, ogeessota biyya sanaaf gahumsa ogummaa ofii gumaachan gitarraa kaafatanii waan jiru hunda ofii dhuunfachuun jiraachuu fedhu. Akuman armaan olitti kaase caasaa tika wayyaanee gubbaa hanga gadiitti kan hoogganu ilmaan Tigiraay qofa. Amma caasaa kana daran jabeessanii Geetaachoo Asaffaa, Haderaa Abarraa fi Debretsion Gebremaariyaam harka galchuun isaanii olaantummaa kana itti fufsiisuuf murannoo qaban akeeka. Naannoolee hundarrattis gaafatama tikaa ta’ee kan hojjetu ilmaan Tigiraay qofaadha.
Gama naannoo Oromiyaattis yoo dhufne namoota caasaa tikaa wayyaanee kana keessatti yeroo dheeraaf maammila turan, caasaa kana keessaatti guddatan, amala caasaa kanaa fudhatanii qabsoo gufachiisaa turan walitti qabanii maqaa haaromsaan aangomsanii jiru. Karaa namoota kanaas Oromiyaan guutummaa guutuutti harka tikaa jala seentee jirti. Dhoksaan ija jabaatanii dubbachuu, miidiyaarratti akka barbaadan diina jedhanii lallabuu asirraa madda. Kun hubatamuu qaba. Sadarkaa qabsoon keenya irra gaheen wayyaaneen boolla awwaala isheetti dhihaattee jirti. Wayyaaneen garuu akka salphaatti awwaalamuuf hin teessu. Adeemsi isaan Oromiyaa keessatti dalagaa jiran kun Counter Revolution dha. Warraaqsa keenya kana gufachiisuuf namoota qabsoo kana tooftaa addaan gufachiisuu danda’an jedhamanii yaadan fayyadamuu qabu. Kana hundaa duuba taa’ee kan qindeessu, tarsiimoo itti baasu, karaa qabsiisuu fi tarkaanfii fudhatu Geetaachoo Asaffaa ti. Haga caasaan nama kanaa hundeen hin diigamnetti wayyaaneen hin buqqaatu.
Wabii Oromoon akka sabaatti of harkaa qabu qabsoo isaati. Amma Oromoon qabsoo hadhooftuu ilmaan ofii itti wareegeen humna dhugaa gaanfa sana keessatti jijjirama diimokiraasii argamsiisu, nagaa fi tasgabbii waaraa fidu ta’uu isaa addunyaaf ifa godhaa jira. Bu’aan qabsoo keenyaan hanga ammaatti argaman akka humna diinaan hin dhuunfatamne iggitii itti gochuun murteessaadha. Kan hafe qabsoon argama. Ummanni keenya caasaa diinaa keessaa waan argatu hin jiru. Waan argachuun irra jiru qabsoo isaan mirkaneeffachuu qaba.